Maitirwo Echokwadi-Nguva Yemaketi Mitengo Inogona Kuwedzera Bhizinesi Performance | Martech Zone
Maitirwo Echokwadi-Nguva YeMusika Mitengo Inogona Kuwedzera Bhizinesi Performance
Chipiri, February 11, 2020 Chipiri, February 11, 2020 Pete Eppele
Sezvo nyika yazvino uno ichikura kuwedzera kukosha pakumhanya uye nekuchinjika, kugona kupinza chaiyo-nguva, mitengo yakakosha uye nhungamiro yekutengesa mumatanho avo ekutengesa inogona kupa mabhizinesi ruoko rwepamusoro kune vakwikwidzi kana zvasvika pakusangana nevatengi zvinotarisirwa. Ehezve, sekudiwa kwekuita kwekuwedzera kuri kuwedzera, saizvozvowo matambudziko ebhizinesi.
Mamiriro emusika nemashandiro emabhizimusi ari kuchinja nekumhanyisa kuri kuwedzera, zvichisiya makambani achitambura kuti apindure kune zvinokonzeresa mitengo - zviitiko zvakaita sekuchinja kwemitengo, mitero, mitengo yemakwikwi, chimiro chekuverenga, kana chero chinhu chinoda shanduko yemutengo - nekukurumidza, zvine mutsindo uye zvinobudirira. Kamwe kungofungidzira uye kutarisirwa, mitengo yemitengo iri kuitika zvakanyanya kazhinji.
Muna 2020, vatengi veB2B vanongotarisira chiitiko chakaita sevatengi kubva kune vanopa bhizinesi - kunyanya zvine chekuita nemutengo. Kunyangwe paine kusanzwisisika kwemutengo weB2B, vatengi vanotarisira kuti mitengo inonyatsoratidza mamiriro emusika, akaenzana, akagadzirwa uye anowanikwa ipapo - kunyangwe makuru makotesheni.
Kuvimba nenzira dzenhaka kumisikidza mitengo kwave kungoshandira kuwedzera zvakashata mhedzisiro yekukwira kwemitengo. Asi, vatungamiriri vanoona vanofanirwa kufungidzira nzira dzavo kuendesa Chaiyo-Nguva Musika Mitengo.
Yechokwadi-Nguva Musika Mitengo chiratidzo chemutengo icho chiri chine simba uye chesainzi. Kusiyana nedzimwe nzira dzemitengo ine simba, haimire pakuita mitemo; inokurumidza kupindura, asi nenzira ine hungwaru.
Muchikamu chino, ini ndinokufamba iwe kuburikidza nemaviri mashandisiro emakesi eReal-Nguva Musika Mutengo - muCommerce uye mumutengo kubvumidzwa kufambiswa kwemabasa kwemaodha - uye kurukurai kuti kufungidzira mamiriro quo kunogona kubatsira zvirinani bhizinesi rako nekusimudzira mashandiro ebhizinesi.
Chaiwo-Nguva Musika Mutengo muCommerce - Zvazviri Uye Nei Uchiida Izvo
Kuona kuti mitengo inoita mushe mushe nenzira dzechinyakare zvinonetsa pachezvayo; makambani akatambanudzwa mberi nekupinda kweCommerce.
Mibvunzo inosimbisisa yandinonzwa kubva kuvatungamiriri vekambani yeB2B kana zvasvika kune yakasimba eCommerce mhinduro ine chekuita nemitengo. Mibvunzo inosanganisira:
Ndeapi mitengo anofanirwa kupihwa kune vatengi pamhepo?
Ndingaite sei kusiyanisa mitengo yakakwana kuti ndikudze hukama huripo hwevatengi?
Ko kana mitengo yandinoratidza online iri yakaderera pane izvo vatengi vangu vanga vachibhadhara?
Ndingaite sei kuti ndive nemutengo wakakodzera uriko unokwezva zvakakwana kuti mutengi mutsva atange kuita bhizinesi neni pasina kupira margin akawandisa?
Mitengo yangu yakanaka zvakakwana kutengesa zvinhu zvitsva kune vatengi, pasina kutaura nemutengesi kana kuda kutaurirana?
Yese mibvunzo iyi yakanyanya kushanda, zvisinei, kugadzirisa imwe uri wega hakuzokupe kukwikwidza kwenguva refu mune ino nzira inokosha. Asi, eCommerce mitengo inofanira kunge ichinyatso simba. Mitengo ine simba - apo chimwe chinhu chebuzzword - zvinoreva kuti vatengi vako vanoona mitengo inoenderana nemamiriro emusika chero panguva yakapihwa nenguva. Mune mamwe mazwi, Yechokwadi-Nguva Musika Mitengo.
Nepo tsananguro iri nyore, kuiwana haina kutwasuka. Muchokwadi, chaiyo-nguva musika mitengo yeCommerce haigoneke kana chete maturusi ari mubhokisi rako rekushandisa ari echinyakare maspredishiti uye akapatsanura dhata masosi anokura stale vasati vagone kuongororwa, ndoda kuita.
Asi, mitengo yevatengesi ve software vanogona kukubatsira kumisikidza discrete asi panguva imwe chete mitengo yemitengo online inozadzisa akawanda zvibodzwa zvebhizinesi, uku uchipa vatengi mitengo iyo yavanotarisira pasina kana lag nguva.
Imwe eCommerce yekushandisa kesi iri kushandisa online-yakatarwa dhata senge peji rekutarisa, shanduko, kusiyiwa kwengoro uye kuwanikwa kweyekuisa kumisikidza akawanda maano ekudzora eCommerce mitengo. Semuenzaniso, yakakwira hesheni uye kutarisa peji zvine yakachinja kutendeuka zvinogona kuratidza kuti mutengo wakanyanya kukwirisa. (Pane iwo mutengo wekutanga!)
Kumisikidza njere nzira dzekudzikisira kuri nyore zvisingaite nenzira iyi, iyo inobvumidza mushandisi kupinza mukati uye kuongorora akapatsanura maseti e data, asi zvakare gadzirisa mabhureki ekuderedza pane nhunzi. Semuenzaniso, nekukurumidza kumisikidza makumi matatu muzana mutengo wekudzikisira pauwandu hwezvikamu makumi maviri kana data richiratidza mitengo yakanyanya kukwirisa kufambisa kuverenga. Kana ichibatanidzwa kuburikidza neakakwira-kuwanikwa API, iyo mitsva mitengo kana zvidzikiso zvinogona kungoerekana zvadzoserwa mune yako eCommerce chiteshi.
Pamusoro pekumisikidza nzira zhinji dzekudzikisira, Real-Nguva Musika Mitengo yeCommerce inobvumidza makambani eB2B ku:
Siyanisa mitengo yevatengi varipo uye vashanyi vatsva padanho rezvigadzirwa kana chikamu cheSKU
Gadza eCommerce-yakanangana nezvidimbu zvinogona kuve zvemunhu (kana zvakanangwa) kune vatengi zvikamu uye zvigadzirwa zvigadzirwa
Ipa mutengi-akasarudzika chibvumirano mitengo uye ine simba tiered mitengo yehuwandu kuputsa online
Sanganisa elasticity-based mutengo optimization, kuverengera omnichannel mutengo kusagadzikana kunozadzisa mari uye margin zvinangwa zvebhizinesi
Kuchinja kubva pakupindura, kunetsa maitiro kunoda kufungidzira imwe inoshanda, data-sainzi inotyairwa nzira yekuendesa Yechokwadi-Nguva Musika Mitengo. Nekudaro, mabhizinesi anogona kuve akashongedzerwa zvirinani kusangana nezvinotarisirwa nevatengi pamhepo.
Yechokwadi-Nguva Musika Mitengo yeMirairo Inovandudza Zvemari uye Zvekushandisa Mhedzisiro
Muchokwadi, iwo iwo mabhenefiti eiyo Chaiyo-Nguva Musika Mutengo weCommerce unowedzeredzwa zviri nyore kune mamwe mitengo uye odha maitiro mukati mekambani yeB2B. Kana mitengo ine simba, yakagadziridzwa ikaendeswa kuburikidza neakakwira-kuita API, iyo denga ingangoita muganho kana zvasvika pamhando dzematambudziko aunogona kugadzirisa munguva chaiyo.
Anokosha anowana mubatsiri weiyo chaiyo-nguva yemutengo chinhu inguva yakareba Zilliant mutengi Shaw Industries Group Inc., mupasi wepasi rese mupi anoshanda anodarika madhora 2 bhiriyoni-madhora 'anokosha emari yegore nemamirioni emitengo yemutengo wevatengi.
Shaw anoshandisa kugona kwemitengo kuti asimbise kuti iwo maodha anowirirana nemitengo yakabvumiranwa-munguva chaiyo, uye wozoiendesa kune vanobvumidza (s) kwakaringana zvichibva pamatanho ekubvumidzwa atinogona kushandura zviri nyore. Kana paine chero kukanganisa kwemitengo kukaonekwa, iyo odhi inotumirwa yakanangana nepakakodzera nzvimbo yekubatana kuti ibvumidzwe kana kugadziriswa nekukasira. Iyo software mashandiro akagonesa Shaw kuti abudirire kugadzirisa zvingangoita zviuru gumi neshanu nezvikumbiro pazuva, uye nekuchinja shanduko yekufambisa uye nemazinga ekubvumidza nekukurumidza uye nyore. Aya marudzi eshanduko akatora mavhiki kana mwedzi kuti akanganisa mune yedu yekare system
Carla Clark, Director weRevenue Optimization yeShaw Maindasitiri
Pamusoro pekugona kwekuwana Real-Nguva Musika Mitengo inogona kugonesa, makambani eB2B anomirawo kuwedzera zvakanyanya mari nemipendero apo vachiendesa zvakagadzirirwa vatengi vatengi vanotarisira.
Yechokwadi-Nguva Musika Mutengo weCommerce kana zvimwe zviteshi zvinofanirwa kuwanikwa nekukasira, mitengo yakatarwa inoenderana pamatanho uye inonyatsoratidza mamiriro azvino emusika uye hukama hwevatengi. Iyo inofanirwa kuendeswa ipapo ipapo, kunyangwe kune makuru makotesheni ekukumbira, isina kana lag nguva panguva yekutaurirana. Pamusoro pezvo, kuti mhinduro ive yechokwadi ine simba uye chaiyo-nguva, inofanira zvakare:
Ratidza mutengo wazvino wemusika wakaverengerwa uye / kana wakakwenenzverwa uchipesana nezvakasiyana zvigadzirwa
Shandisa imwe dhata kubva kwakasiyana, kusingagumi masosi zvakanyanya kungwara
Nunura mitengo inoenderana nehurongwa pamatanho munguva chaiyo
Nehungwaru shandura mvumo, kutaurirana, zvinopesana
Dzorera zvakasarudzika zvemuchinjikwa-kutengesa uye kumusoro-kutengesa kurudziro
Kuti udzidze zvakawanda nezve Yechokwadi-Nguva Musika Mitengo iyo inoburitsa yakatarwa, yakangwara uye misika-inoenderana nemitengo kwechinguva chiziviso, verenga chiziviso chaZilliant:
Yechokwadi Nguva Mutengo weE-commerce
Tags: carla clarkmitengo ine simbamitengo yakangwaraPricingchaiyo-nguva musika mitengoYechokwadi-Nguva Musika Mutengo weCommercechaiyo-nguva mitengooptimization yemarishaw maindasitirizilliant
Pete anounza makore makumi maviri echigadzirwa zano ruzivo, achibatsira Fortune mazana mashanu emakambani kusunga Big Data kugadzirisa bhizinesi kuita. SaMuteedzeri Mutevedzeri weMutungamiri weZvigadzirwa neSainzi, Pete anoona nezve kutungamira Zilliant'R R & D kuyedza uye kutsanangura chigadzirwa chigadzirwa lifecy uye zvinodiwa. Asati aZilliant, Pete akashanda seMutevedzeri weMutungamiriri weChigadzirwa Kushambadzira kuYclip. Yclip isati yavapo, Pete akachengetedza KD1 inonyanya kucherwa kwemigodhi uye sarudzo dzekutsigira zvinoshandiswa naWalgreens, Lowe's Home Improvement uye Pepsi / Frito Lay.
Google's SameSite Upgrade Inosimbisa Nei Vaparidzi Vachifanira Kupfuura Beyond Makuki eVateereri Targeting